Uyini umehluko phakathi DataNumen Outlook Repair futhi DataNumen Outlook Drive Recovery? - DataNumen
Umehluko kuphela phakathi kwale mikhiqizo emibili ukuthi basebenzisa idatha yomthombo ehlukile, ngokulandelayo:
· DataNumen Outlook Repair(DOLKR) ithatha ifayela le-PST elonakele noma elonakele njengedatha yomthombo.
· DataNumen Outlook Drive Recovery(I-DODR) ithatha idrayivu noma idiski njengedatha yomthombo. Idrayivu noma idiski yindawo lapho ugcine khona amafayela wakho we-PST esikhathini esedlule.
Ngakho-ke uma unefayela le-PST elonakele noma elonakele esandleni, ungasebenzisa i-DOLKR ukulungisa lelo fayela bese uthola ama-imeyili ngaphakathi kwefayela le-PST. Uma i-DOLKR yehluleka ukubuyisa ama-imeyili abewafuna, usenalo ithuba lokuthola la ma-imeyili, ngokusebenzisa i-DODR ukuskena idrayivu / idiski lapho ugcine khona ifayela le-PST esikhathini esedlule.
Noma uma ungenalo ifayela le-PST esandleni, ngokwesibonelo, ufometha yonke idiski / idrayivu yakho, ususa unomphela ifayela le-PST, noma i-hard disk / idrayivu yakho yephukile futhi awukwazi ukufinyelela amafayela e-PST kuyo, njll. , lapho-ke ungasebenzisa i-DODR ngqo.
Umehluko, disk, idrayivu, ost, pst
Kubuyekezwe ngoMeyi 17, 2021
Kungani izidumbu zemiyalezo etholakele zingenalutho?Uyini umehluko phakathi DataNumen Outlook Repair futhi DataNumen Exchange Recovery?